Ny rameva, fitaovam-pitaterana tena mahomby | Fitsangatsanganana tanteraka
Daniel | 29/06/2021 11:16 | Nohavaozina amin'ny 29/06/2021 12:17 | Ejipta
Hatramin'ny andro tena taloha, angamba tokony ho tamin'ny 3.000 taona lasa izay, dia efa nampiasa ny olombelona ny rameva ho toy ny fitaovam-pitaterana mahomby amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao.
Ireto biby manana kofehy ireto dia malaza amin'ny fitehirizana tavy (ivaiva) mipoitra avy ao aoriany, dia ampiasain'ny olona an'arivony taona maro lasa izay. Izy ireo dia loharanom-tsakafo (ronono sy hena), ary mbola ampiasaina amin'ny fanaovana akanjo ny hodiny. Fa ambonin'izany rehetra izany, ny fampiasana lehibe indrindra dia ny fitaovam-pitaterana. Misaotra an'i ny anatomia manokana, namboarina manokana toeram-ponenana efitra.
1 Firy ny karazana rameva?
2 Ny "sambon'ny tany efitra"
3 Ny rameva ho fitaovam-piadiana
Firy ny karazana rameva?
Na izany aza, marihina fa tsy ny rameva rehetra eto amin'izao tontolo izao no mitovy, ary tsy ampiasaina ho fitaovana fitaterana. Misy eo amin'izao tontolo izao izy ireo karazany telo ny rameva:
Rameva Bactrian (Camelus bactrianus), izay mipetraka any Azia afovoany. Lehibe kokoa sy mavesatra noho ny karazany hafa. Manana hump roa sosona izy ary volon'ondry ny hodiny.
Rameva bactriana dia (Tranon-jaza Camelus), misy humps roa koa. Miaina amin'ny fahalalahana izy io any amin'ny lemaka karakaina ao Mongolia sy amin'ny faritra sasany ao afovoan'i Sina.
Rameva arabo o Dromedary (Camelus dromedarius), ny karazany malaza indrindra sy marobe, miaraka amin'ny mponina eran-tany 12 tapitrisa. Manana hump iray izy io. Hita manerana ny faritra Sahara sy Moyen Orient izy io. Nampidirina taty Aostralia ihany izy io taorian'izay.
Ny rameva dia mety hahatratra ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora ary dia mahazaka fotoana maharitra nefa tsy mihinana rano indray mitete. Ny dromedary ohatra dia afaka miaina fisotroana tanteraka tanteraka indray mandeha isaky ny 10 andro. Mahagaga ny fanoherana ny hafanana: afaka miaina amin'ny efitra mafana indrindra izy na dia very hatramin'ny 30% amin'ny vatan'ny vatany aza.
Misotro rameva Bactrian
Ahoana no fomba iainan'ireo biby ireo amin'ny rano kely? Ny tsiambaratelo dia ao amin'ny menaka izay miangona ao an-tranon'alan'izy ireo. Rehefa mila hydration ny vatan'ny rameva, ny tavy matavy ao anatin'ireny fantsona ireny dia metaly mamoaka rano. Etsy ankilany, ny voa sy ny tsinainao dia manana fahaiza-manao lehibe hamerenana ny tsiranoka.
Saingy tsy midika izany fa afaka miaina tsy misy rano ny rameva. Rehefa tonga ny fotoana fisotroana rano, ny rameva lehibe 600 kg dia afaka misotro hatramin'ny 200 litatra ao anatin'ny telo minitra fotsiny.
Ny "sambon'ny tany efitra"
Io fanoherana lehibe ny hetaheta sy hafanana io, izay tsy zahana amin'ny ankamaroan'ny biby mampinono, dia nanome satroboninahitra an'ity biby ity ho namana akaiky indrindra an'ny olona ho tafavoaka velona any an'efitra.
Nandritra ny taonjato maro, mpanao dia lavitra Nampiasa ny rameva ny mpivarotra mba hiampita ny faritra efitra lehibe. Misaotra azy fa afaka nametraka làlana sy fifandraisana ara-barotra sy ara-kolontsaina izay tsy ho vita raha tsy izany. Amin'io lafiny io dia tokony homarihina fa ny rameva dia singa iray lehibe amin'ny fampandrosoana ireo vondrom-piarahamonina olombelona maro any Azia sy Afrika Avaratra.
Raha ranomasina misy ala ny efitra, dia ny rameva no hany lalana hivezivezena ao aminy sy ny antoka hahatongavany amin'ny seranana azo antoka. Noho izany antony izany dia malaza amin'ny anarana hoe "Sambo tany an'efitra".
Karavenan'ny rameva miampita ny tany efitra
Na dia amin'izao fotoana izao aza, rehefa nahavita nanolo azy ho fitaovam-pitaterana ireo fiara amin'ny faritra rehetra sy GPS dia mbola ampiasain'ny foko Bedouin maro ny rameva. Na izany aza, mahazatra kokoa ny mahita azy any amin'ny firenena sasany amin'ny anjara asany vaovao manintona mpizahatany noho ny amin'ny fiara.
Fahita matetika, amin'ny diany mankany amin'ny toeran-kaleha toa an'i Maroc, Tonizia, Egypta na Emirà Arabo Mitambatra dia manakarama mpizahatany fitsangatsanganana rameva namaky ny efitra. Miaraka amin'izy ireo (eo am-pelatanan'ireo mpitari-dalana za-draharaha foana), ny mpitsangatsangana mitady ny fihetsem-po dia miditra amin'ny faritany foana sy tsy misy fitsidihana, avy eo matory an-day ao ambanin'ny lanitra feno kintana any an'efitra. Ny rameva, rehefa dinihina tokoa, dia tandindon'ny fotoana adino efa ela ny dia tantaram-pitiavana sy ny miafina miafina.
Ny rameva ho fitaovam-piadiana
Ankoatry ny fahombiazany voaporofo ho fitaovana fitaterana, ny rameva koa dia nampiasaina nandritra ny tantara toy ny fitaovam-piadiana. Efa tamin'ny andro fahagola ny Persa Achaemenid Hitan'izy ireo ny kalitaon'ireto biby ireto izay tena ilaina amin'ny adin'izy ireo: ny fahaizany mampitahotra soavaly.
Noho izany, nanjary fahita ny fandraisana anjaran'ny mpiady nitaingina rameva tamin'ny ady maro, ny fanefitra tonga lafatra hanafoanana ny mpitaingin-tsoavaly fahavalo. Antontan-taratasy taloha maro no manamarina ny andraikitry ny rameva amin'ny fandresena ny fanjakan'i Lydia tamin'ny taonjato faha-XNUMX tal.
Ny rameva sy ny dromedary dia anisan'ny tafika niady tao Afrika Avaratra sy Moyen Orient nanomboka talohan'ny andron'ny romana ary hatramin'ny fotoana farany. Na ny tafiky ny Etazonia noforonina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny vondrona rameva manokana naparitany tao amin'ny fanjakan'i Kalifornia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny rameva, fitaovam-pitaterana tena mahomby
haran-dranomasina dia hoy izy:
fa raha onja hafa ioaaaaaaaaaa
Valiny amin'ny haran-dranomasina sebas
sebasola dia hoy izy:
Mamaly an'i sebasola
sebas hoy dia hoy izy:
Hoy ny navalin'i sebas